Akhriso Kulmadii Boxing Day ee Horyaalka Ingiriiska “Sawirro” – Radio Muqdisho
Akhriso Kulmadii Boxing Day ee Horyaalka Ingiriiska “Sawirro”
Maanta waxaa kulamada Boxing Day wada ciyaaray dhamaan kooxaha heerka koowaad ee dalka ingiriiska.
Kooxda West Bromwich Albion ayaa waxaa garoonkeeda The Hawthorns 1-3 uga badiyay Manchester City.
Kooxda Manchester City ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii sideedaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Fernando.
Ciyaaryahan Yaya Toure ayaa daqiiqadii 13-aad ee ciyaarta gool labaad oo rigoore ah u dhaliyay kooxda Manchester City.
Ciyaaryahan David Silva ayaa daqiiqadii 35-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Manchester City,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Brown Ideye ayaa dhamaadkii ciyaarta gool u dhaliyay kooxda West Bromwich Albion.
Kooxda Manchester City ayaa kaalinta labaad uga jirto horyaalka ingiriiska,waxaana ay leedahay 42-dhibcood,halka kooxda West Bromwich ay ku jirto kaalinta 15-aad,iyadoo leh 17-dhibcood.
Kooxda Manchester United ayaa garoonkeeda Old Trafford 3-1 uga badisay kooxda Newcastle United.
Kooxda Manchester United ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqadii 23-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Wayne Rooney.
Ciyaaryahan Wayne Rooney ayaa daqiiqadii 36-aad ee ciyaarta goolka labaad u dhaliyay kooxda Manchester United,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Robin van Persie ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Manchester United.
Ciyaaryahan Papiss Cisse oo bedel ku soo galay ciyaarta ayaa dhamaadkii ciyaarta gool rigoore ah u dhaliyay kooxda Newcastle United.
Kooxda Manchester United ayaa horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta sedaxaad,waxana ay leedahay 35-dhibcood,halka kooxda Newcastle ay horyaalka uga jirto kaalinta tobanaad,iyadoo leh 23-dhibcood.
Kooxda Crystal Palace ayaa waxaa garoonkeeda Selhurst Park 1-3 uga badiyay kooxda Southampton.
Kooxda Southampton ayaa goolka la hor martay,waxaana daqiiqaii 17-aad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Sadio Mane,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Ryan Bertrand ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta gool labaad u dhaliyay kooxda Southampton.
Ciyaaryahan Toby Alderweireld ayaa daqiiqadii 54-aad ee ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Southampton.
Ciyaaryahan Scott Dann ayaa dhamaadkii ciyaarta gool u dhaliyay kooxda Crystal Palace.
Kooxda Southampton ayaa horyaalka uga jirto kaalinta afaraad,waxana ay leedahay 32-dhibcood,halka kooxda Crystal Palace ay kamid noqotay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Leicester City ayaa waxaa garoonkeeda King Power Stadium 1-2 uga badiyay kooxda Tottenham.
Kooxda Tottenham ayaa goolka la hor martay,waxaan daqiiqadii labaad ee ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Harry Kane,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Jose Leonardo Ulloa ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Leicester City.
Ciyaaryahan Christian Eriksen ayaa daqiiqadii 72-aad ee ciyaarta goolka labaad ee guusha oo laad xur ahaa u dhaliyay kooxda Tottenham.
Kooxda Tottenham ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay kaalinta lixaad,waxana ay leedahay 30-dhibcood,halka kooxda Leicester City ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya
Kooxda Swansea City ayaa garoonkeeda Liberty Stadium 1-0 uga badisay kooxda Aston Villa.
Ciyaaryahan Gylfi Sigurdsson ayaa daqiiqadii 13-aad ee ciyaarta goolka guusha oo laad xur ahaa u dhaliyay kooxda Swansea City.
Kooxda Swansea City ayaa horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta todobaad,waxana ay leedahay 28-dhibcood,halka kooxda Aston Villa ay horyaalka uga jirto kaalinta 13-aad,iyadoo leh 20-dhibcood.
Kooxda Burnley ayaa waxaa garoonkeeda Turf Moor 0-1 uga badiyay kooxda Liverpool.
Ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa daqiiqadii 62-aad ee ciyaarta goolka guusha u dhaliyay kooxda Liverpool.
Kooxda Liverpool ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska ka soo gashay kaalinta sagaalaad,waxana ay leedahay 25-dhibcood,halka kooxda Burnley ay kamid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.
Kooxda Everton ayaa waxaa garoonkeeda Goodison Park 0-1 uga badiyay kooxda Stoke City.
Kooxda Stoke City ayaa goolka la hor martay,waxaana dhamaadkii qeybtii hore ee ciyaarta gool rigoore ah u dhaliyay ciyaaryahan Bojan Krkic, sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Kooxda Stoke City ayaa kala horeynta horyaalka ingiriiska uga jirto kaalinta 11-aad,waxana ay leedahay 22-dhibcood,halka kooxda Everton ay horyaalka uga jirto kaalinta 12-aad,iyadoo leh 21-dhibcood.
Kooxda Sunderland ayaa waxaa garoonkeeda Sun Light Stadium 1-3 uga badiyay kooxda Hull City.
Kooxda Sunderland ayaa goolka la hor martay,waxaana bilowgii ciyaarta u dhaliyay ciyaaryahan Adam Johnson.
Ciyaaryahan Gaston Ramirez ayaa daqiiqadii 33-aad ee ciyaarta gool barbardhac ah u dhaliyay kooxda Hull City, sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan James Chester ayaa bilowgii qeybtii labaad ee ciyaarta gool labaad u dhaliyay kooxda Hull City.
Ciyaaryahan Nikica Jelavic ayaa dhamaadkii ciyaarta goolka sedaxaad u dhaliyay kooxda Hull City.
Kooxda Hull City ayaa ka soo baxday sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseya,waxana ay soo gashay kaalinta 17-aad,iyadoo leh 16-dhibcood,halka kooxda Sunderland ay horyaalka uga jirto kaalinta 14-aad,iyadoo leh 19-dhibcood.